Ry Ravoretra • AoRaha
Mendrika halain-tahaka ny hetsiky notarihin’ny ekipan’ny kaomisarian’ny polisin’ny Boriborintany voalohany, tetsy amin’ny tsenan’ny Petite Vitesse : nampandraisina kifafa ireo mpivarotra izay nahitana loto teo amin’ny manodidina ny toeram-piasany. Aiza ve ka sady efa tsy manara-dalàna amin’ny fibahanana ny lalana natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra no mbola voretra noho ny fanariana ny fako rehetra eo am-pitoerana eo ihany ?
Mila fanetsehana olona maro (amin’ny fanaraha-maso sy ny fitorohana) ny famerenana ny fampanajàna ny fahadiovana eto amintsika. Satria tsy eto an-drenivohitra ihany io fa saika ho manerana an’ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara. Tsy misy firenena mandroso miaraka amin’ny havoretrana izany. Efa porofon’ny havoretrana ara-tsaina rahateo ny fandotoana iniana ataon’ny ankamaroan’ny Malagasy, izay zary fahazaran-dratsy mihitsy ny mandrora etsy sy eroa; manipy sisantsigara eny rehetra eny; manipy fako amin’ny lalambe izay andalovana; mivalan-drano isak’izay andrin-jiro na tamboho na tsatokazo mety manakona izay kely azo takonana… Raha entin-kasosorana manoloana ny karazan-doto miparitaka eto an-drenivohitra fotsiny, dia satry hoarahina fampidirana amponja sady faritana ho toy ny heloka bevava mihitsy izany tsy fanajana ny fahadiovana izany.
Nefa anie ka n’aiza n’aiza alehanao dia saika ahitana an’ilay soratra manao hoe « hajao ny fahadiovana » avokoa e! Eny, hatrany amin’ireo toeram-pivoahana, kanefa iarahamahalala izao fa maloto no fanao any.
Fitaratra ihany ry zareo polisy etsy Analakely. Antenaina hitondra vokatra tsara sy fiovan’ny toe-tsaina amin’ny fanajana ny fahadiovana ihany koa ny politikan’ny kaominina Antananarivo renivohitra, izay hampahafantatra ny fitsipika vaovao mifehy ny fahadiovana eto amin’ny tanàna! Fa tsy andrenivohitra ihany anefa no feno an-dRavoretra, sady tsy mifidy saranga…